Ngwakọta Semalt: Ihe Ntanetị Weebụ Weebụ Weebụ Iji Wepụ Data Online
Ihe niile wepu ozi sitere na ibe weebụ. Ha bara uru maka onye ọ bụla na-agbalị ịnakọta data dị mkpa sitere na Web Wide Web. Ngwaọrụ ndị a na-achọ data ọhụrụ na-akpaghị aka ma ọ bụ aka, na-esetịpụ data ọhụrụ ma ọ bụ dị na ya na ịchekwa ya maka ịnweta gị - 30 watt istick. Dị ka ọmụmaatụ, ụfọdụ ihe nchọgharị weebụ na-achọ iji nweta ozi gbasara ngwaahịa sitere na eBay na Amazon. Ha na-enyere anyị aka ijide ihe na-eme n'ahịa.
Ngwaọrụ Weebụ Weebụ kacha mma:
Ka anyị leba anya na ndepụta nke ihe nchọgharị weebụ kasị mma na ịntanetị:
Dexi.io na-akwado nchịkọta data site na ọtụtụ ọnụọgụ saịtị na-achọghị ibudata. Ọ pụtara na ọ dị mkpa ka ị meghee ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti ma malite ya na nchịkọta data gị. Ngwá ọrụ a na-abịa na nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ, na data nwere ike ịchekwa na Google Drive na Box.net.
Scrapinghub bụ usoro ihe nchịkọta data nchịkwa siri ike nke na enyere ndị mmepe na programmers aka inweta data bara uru. Usoro a na-eji obere proxy rotator a na-akpọ Crawlera, nke na-enyere aka ịwa nnukwu ọnụọgụ weebụsaịtị..
A na-achọ VisualScraper iji wepu data na ederede na ihe oyiyi; enwere ike iji usoro a iji nata ozi site na isi na ibe weebụ. Ị nwere ike ịnakọta, jikwaa ma hazie data weebụ gị na interface enyi ya.
Spinn3r na-enyere aka nchịkọta ọdịnaya dịka nke Google ma chekwaa data ị nwetara na faịlụ JSON. Onye ntanetị weebụ a ga-enyocha saịtị gị mgbe niile ma chọpụta mmelite site na isi mmalite dị iche iche ka ị nweta akwụkwọ nke oge.
80legs bụ ihe ntanetị weebụ na onye na-ewepụ data. Ị nwere ike ịhazi usoro a dị ka ọ bụla ị chọrọ ka ọ na-ebute nnukwu ọnụọgụ data ozugbo.
Onye na-ekpochapu ihe bụ ihe ngosi Chrome a ma ama na ọtụtụ atụmatụ. Ọzọkwa, ọ dị mma maka mbupụ data gaa na Google Drive na ọ bara uru maka ma ndị na-abụghị ndị mmemme na ndị mmemme. Ngwá ọrụ a n'efu ga-emepụta obere XPaths na-akpaghị aka maka URLs gị.
OutWit Hub bụ atụ egwu Firefox dị egwu na njirimara nchịkọta data. Ọ na-enye aka mee ka ọchụchọ weebụ anyị dị mfe ma nwee ike ịgagharị na ibe weebụ na-akpaghị aka, ichekwa data buru ibu kwa awa.
Import.io na-enye ya ịmepụta dataseti ahụ kpọmkwem site na ịbịata ozi sitere na ibe weebụ ma bufee ya na faịlụ CSV. Usoro ihe a na-eji nkà na ụzụ nke na-egbuke egbuke ọtụtụ nde data kwa ụbọchị.